Thwebula FreeMind 1.1.0 futhi 1.0.1 – Vessoft
FreeMind – a software ngeso lengqondo izinhlelo imibono ngesimo scheme. Isofthiwe ikuvumela ukuba adale namacebo izitayela nezakhiwo ezahlukene, engeza links, amazwi search, ukufihla ezinye izingxenye imidvwebo njll FreeMind isekela umsebenzi ngemifanekiso, umbhalo namatafula ezinobukhulu obuhlukahlukene nezakhiwo. Isofthiwe iqukethe amathuluzi amaningi ukuba bandise futhi ulungiselele schemes. FreeMind futhi ikuvumela ukuba ukuvimba izingxenye ezihlukene amaqhinga futhi aphathe software usebenzisa hotkeys.
Lakha futhi ilawula schemes
Usekela nezitayela ezihlukahlukene kanye nezakhiwo of the izikimu
Usekela takhiwo various ifayela
Amazwana on FreeMind:
FreeMind Ahlobene software:
English, Français, Español, Deutsch... ComboFix 17.1.4.1
Akwazi ukugcina Kuyithuluzi elihle ukuhlonza kufihlwe amafayela ezisolisayo yezinkampani ehlukahlukene yokwaziswa. Isofthiwe ubonisa umbiko inqubekelaphambili kanye amafayela bathola.